Semalt: Chii Chine Kugutsikana? 4 Mhando dzeWebhu Content Dzakatorwa paNet
zvishandiso. Vazhinji webmasters uye mablogikudzi vanochengetedza zvinyorwa zvavo pasi pemitemo yekodzero, uye kuisa ruzivo rweba kuba sepakutanga kune mhosva yakakomba!
Zvinosuruvarisa, webhutakiti yakawanda inogadziriswa nokuda kwezvinangwa zvisinganzwisisiki uye zvisiri pamutemo zvakadai semabhizimisi ekutsvaga, kunyara, uye kubatwa kwedhaka. Zvisinei, zvinangwa zvepamutemo uye zvechokwadi zvezvinyorwa zvinyorwa ndezvokupinda kwepa data, kugadzirisa zvinyorwa, kubuda kwemashoko, kukwikwidzana kwehuchenjeri, mukurumbira wehutano kana bhizinesi analytics.
Mavara mana ezvinyorwa zvinowanikwa paInternet:
Vamwe webmasters uye mablogiki vanoshandisa zvinyorwa kubva kumawebhusayithi ane mbiri uye mabloggi, vachifunga kuti kuwedzera kwemaji mapeji avo zvakanaka pakutsvaga injini rankings. Uyezve, chero humwe huwandu hunogona kutorwa, asi huwandu hwemhando yezvinyorwa zvinotsanangurwa zvinotaurwa pasi apa.
1. Vaparidzi vedhijita nematarekori:
Vaparidzi vedzinhare uye mabhuku epaIndaneti vanowanzotarirwa nevanoridzidza uye vanosimbisa, avo vanofunga kuparadzira zvinyorwa kubva pamatunhu aya evanamato avo ega. Yell. com ndiyo muenzaniso wakadaro. Iyi nhepfenyuro yevashandi vekutengesa mitambo yakasiyana-siyana uye inowanikwa paIndaneti yakawana kubudirira kukuru mumwedzi ichangopfuura. Zvakawanda zvehutano panzvimbo ino zvakatorwa, uye spammers nguva dzose vanotarisa nzira dzokunyora mamwe mapeji aro. Saizvozvowo, Manta ndiro webhumo rakakurumbira uko mabhiriyoni emamiriyoni makumi maviri akazvinyora ivo pachavo nekuda kwekutengesa. Zvinosuruvarisa, zvakawanda zvaro zvine zvinyorwa, uye nhamba yakawanda yebhoti iri kushandiswa nekuda kwechinangwa ichi.
Makore anoverengeka adarika, mahofisi edzimba dzakarwiswa nehuwandu hwezvokudya, uye kudzorera kunodhura mari inopfuura mamiriyoni gumi emadhora.
Zvinoratidzika sezviri mukati memafiriji ose ekufambisa zvakatorwa. Makambani aya haasi kungopa ruzivo pamusoro pezvinzvimbo zvakanakisisa munyika asiwo anopa maitiro ekufambisa kune vatengi vavo. Nzvimbo dzekufambisa dziri nyore nyore kwezvakagadzirwa scrapers. Vamwe vekutungamirirwa kwemaInternet avo vari panjodzi ndeyeKayak, TripAdvisor, Priceline, Trivago, Expedia, uye Hipmunk. Vakagadzira mamiriyoni-dollar meta-kutsvaga mabhizinesi, uye zvinyorwa zvadzo zvinowanzopwa uye zvinoshandiswa zvakare pawebhu dzemadiki uye mabloggi.
Ichokwadi kuti zvinyorwa zve-e-commerce nzvimbo hazvigoni kutorwa nyore nyore, asi mawebsite akaita se eBay neAmazambique achiri kutemerwa kutsanangurwa kwekutengesa uye kugadzirwa Source .